U-Eramus yebo, u-Erasmus no | Ukwakheka nezifundo
UCarmen Guillen | | Amathiphu, Erasmus, IYunivesithi
Mhlawumbe ukuleso sikhathi lapho ukuqhubeka no-Erasmus kuyinkinga enkulu ekhanda lakho, ngakho-ke besifuna ukukusiza ngezinto okufanele uzazi ngaphambi kokushiya i-Erasmus uma ekugcineni ukhetha u- "yebo". Mhlawumbe kungale ndlela kuphela, futhi ungakhetha kangcono u- "cha" ... Ngubani owaziyo!
1 Izinto okufanele wazi ukuthi uyaqhubeka yini no-Erasmus
1.1 Izidingo zokufaka isicelo se-Erasmus Studies scholarship
1.2 Singabe sikhuluma ngemali engakanani?
1.3 Isipiliyoni sika-Erasmus
Izinto okufanele wazi ukuthi uyaqhubeka yini no-Erasmus
Izifundo ze-Erasmus yilezo ezenziwa phakathi kwamanyuvesi aseYurophu. Uma okufunayo ukuphuma ngaphandle kweYurophu, mhlawumbe kufanele ubheke "izivumelwano zamazwe amabili" inyuvesi ngayinye enayo.
Uma ukuhlala eYurophu kuyinto yakho, kufanele ukhethe hlobo luni lwezifundo ze-Erasmus?
I-Erasmus Study Scholarships Yibo labo abafundi be-undergraduate noma abaphothule bacela ukutadisha eyunivesithi yase-Europe ukuze benze izifundo ezigcwele noma semester.
I-Erasmus World Scholarships okuyizinto abafundi beziqu ze-master abangazicela.
I-Erasmus Placement scholarships Yilezo okufanele uzicele uma lokho ofuna ukukwenza kusebenza.
Izidingo zokufaka isicelo se-Erasmus Studies scholarship
Kufanele uhlangabezane nezimfuneko ezimbili ezibalulekile:
Udlulise ubuncane bezikweletu ze-ECTS lwezifundo zakho.
Yiba nezinga elithile lolimi olusemthethweni yezwe oya kulo (elihluka ngokuya ngeyunivesithi lapho ukhona).
Singabe sikhuluma ngemali engakanani?
Ngokuya ngesifunda okuso, bazokunikeza inani elingaphezulu noma elingaphansi. Kungani? Ngoba iqukethe izimali ezivela ku-European Union, uMnyango Wezemfundo futhi, kwezinye izimo, nakuMiphakathi Ezimele. Ngakho-ke kuncike kakhulu ekutheni yimuphi umzimba onikelayo.
Kunoma ikuphi, njengoba sifundile, inani alinikezi okuningi: ukudla nokunye okuncane. Ngakho-ke, mhlawumbe iphuzu lokuqala nelibaluleke kakhulu okufanele uliphakamise lapho uqhubeka no-Erasmus noma cha, ukuthi ungakghona ukulithenga ngempela.
Yini ongayilindela ku-Erasmus wakho?
Uzohlangana nabantu abavela emazweni amaningi ahlukene futhi uzokwenza abangane abasha.
Amaqembu "anemishwalense"… Empeleni, kucatshangwa ukuthi labo abaya ku-Erasmus benza lokho kuphela ngamaholide.
Uzothola izinhlelo ezintsha zemfundo, bese ungaqhathanisa naleyo esezweni lakho.
Uhambo ngokwalo lungokuhlangenwe nakho: thola indawo yokuhlala, cela izeluleko, qhafaza lapho ukhuluma futhi uqondakala, njll.
Kanye ne- «etcetera» ende ozoyithola kuphela uma uthatha isinqumo sokuya noma bakutshela ... Usuvele ukhethe indawo oya kuyo?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Amathiphu » U-Eramus yebo, u-Erasmus cha
Izeluleko zokuxhumana okufanele zenziwe